यी ३ कारणले ईश्वर पोखरेल हुनैपर्छ र हुनुहुँदैन - Kendrabindu Nepal Online News
यी ३ कारणले ईश्वर पोखरेल हुनैपर्छ र हुनुहुँदैन
७ श्रावण २०७६, मंगलवार १९:०५
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ३३ वटा विभाग छन् । यीमध्ये ३२ वटा विभाग गठनको खाकामा समस्या देखिएको छैन । तर पार्टी स्कूल विभागमा भने कसले नेतृत्व लिने भन्ने सम्बन्धमा ठूलै समस्या देखियो । यही कारण साउन ७ मा बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भयो । यसअघि साउन ६ गते बेलुका बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो समस्या सुल्झाउन नसकेपछि ७ गतेको बैठक स्थगित भएको हो ।
स्कूल विभागमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलको दावी छ । अर्थात पूर्व माओवादी र एमालेले यस विभागमा दावी गरेका छन् । श्रेष्ठको पछाडि एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पोखरेलको ब्याकअप अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका छन् ।
आखिर यो विभाग गठनमा किन विवाद आयो ? किन एकअर्कालाई छोड्नै नसक्ने भयो, पार्टी स्कूल विभाग ? यसको कारण धेरैवटा छैनन् । तर ती कारण निश्चय नै दुवै पक्षका लागी गम्भीरचाहिँ भएका छन् ।
पछिल्लो समय आएर पार्टी स्कूल विभाग छनौटलाई दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । कसरी टुंगेला यो विभाग ? यो भिन्न प्रश्न हो । पहिलो प्रश्न के हो भने दुवै पक्षले किन मरिहत्ते गरे त पार्टी स्कूल विभाग हात पार्न ? कारण यस्ता छन्:–
ईश्वर पोखरेल हुनुहुँदैन भन्ने कारण
१. नेकपाको प्रमुख सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हुनुपर्नेमा ईश्वर पोखरेल कडाइका साथ र सक्रिय रूपले लागिपरेका नेता हुन् । पार्टीको दृष्टिकोण र सिद्धान्तबारे तल्लो तहसम्म सैद्धान्तिक प्रशिक्षण तथा स्कूल सञ्चालन गर्ने विभागको प्रमुखमा पोखरेल रहे भने उनले बहुदलीय जनवाद पढाउने छन् भन्ने भय ।
१.२ पार्टीको विचार बहुदलीय जनवाद हो भन्ने सन्देश गएको खण्डमा नेकपा एमालेकरण हुने बुझाइ ।
२. ईश्वर पोखरेल सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा थिएनन् । पार्टी एकता भए पनि पूर्व माओवादी समान नेतृत्वमा आउनु हुन्न भन्नेमा उनको जिकीर थियो । जुन कुरामा उनी अहिले पनि अडिग छन् । अर्थात् ईश्वर पोखरेल माओवादी विरोधी कित्ताको नेतृत्वमा छन् भन्ने आकलन ।
३. पार्टी स्कूल विभाग प्रतिष्ठाको विषय ।
ईश्वर पोखरेल नै हुनुपर्छ भन्ने कारण
१.नेकपाको प्रमुख सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हुनुपर्छ भन्ने ईश्वर पोखरेलले स्कूल विभाग पाएको खण्डमा वैचारिक साख कायम हुने पूर्व एमाले नेताहरूको भित्री बुझाइ ।
१.२ आम पूर्व एमाले कार्यकर्तामा बहुदलीय जनवाद छाड्नुहुन्न भन्ने मनसाय रहेको नेतृत्वको बुझाइ ।
२. पार्टीमा तेस्रो शक्तिमा रहेका माधव नेपाल पक्ष र चौथो शक्तिका रूपमा रहेका वामदेव गौतम पक्षले आफूलाई साथ नदिने भएकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ईश्वर पोखरेललाई साथमा नै लिएर हिँड्न बाध्य ।
ईश्वर पोखरेल, जनवाद, जबज, प्रचण्ड, मदन भण्डारी
Prevईरानले होर्मुजको खाडी बन्द गरे नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
प्रचण्डलाई कसले गर्‍यो प्रधानमन्त्रीको अफर ?Next